Miyuu IOS ka dheecaan badan yahay Android? | Androidsis
Zack | | Tababarada, Noocyada Android
Dhamaanteen waan jecel nahay Android. Laakiin haddii aan qabannay Android iyo IOS waxaan ogaanay in IOS waxqabadka uu u muuqdo mid dheecaan badan leh. Maanta waxaan xallinayaa su'aasha ah Maxay Android ugu fiicnayn sida IOS?
Hagaag, jawaabta waxaa bixiyay injineerka Google Andew Munn ilaa Google+:
Iyagu maahan hakadka GC. Mana aha sababta oo ah Android waxay fulisaa bytecode iyo sababta oo ah macruufka ayaa sameeya lambarka asalka ah halkii. Sababta ayaa ah in macruufka, dhammaan isdhexgalka waxaa lagu farsameeyaa habab loo qoondeeyay, isdhexgalka oo leh mudnaan sare waqtiga dhabta ah ee dhaca marka ficilada qaarkood la joojiyo. Si kastaba ha noqotee Android waxay ku socotaa qaabka kombiyuutarka dhaqameedka, halkaas oo qaabka waxqabadka uu ku dhaco geeddi-socodka ugu weyn ee leh mudnaanta caadiga ah, taas oo keeneysa in wax walba ay u muuqdaan dheecaan yar.
Tusaale ahaan tani waxay ahaan laheyd tusaale ahaan haddii aad daalacaneysid internetka, gudaha IOS haddii nuskii lagusoo rarayo bogga aad ku dhex wareegto wuu joojinayaa rakibaadda oo markii aad fartaada sii deyso wuu cusbooneysiin doonaa. On Android, intaad ku wareegeyso bogga, waxay ku dhammaan doontaa rakibidda isla waqtigaas.
Tani tusaale ahaan kuma dhacdo aaladaha Android-laba geesoodka ah, maadaama kernel walbaba uu mas'uul ka yahay sameynta hal shay (rarida bogga iyo rakibida shaashadda shaashadda).
Dabcan tani waa sharaxaadda fudud. Kuwa aqoonta u leh mowduuca waxaan ku siinayaa sharraxaad buuxda (taas oo horeyba ugu lug lahayd dardargelinta qalabka, hagaajinta koodhka, mudnaanta, iwm), oo ay sameeyeen Ricardo Galli:
Dhibaatada qarsoon ee ku jirta Android asal ahaan waa mushkilad jadwal. Android waxay sifiican ugu shaqeysaa "multitask" (runti "multiprogramming") maxaa yeelay waa Linux oo ficil ahaan ma taaban maaraynta geedi socodka. Si loo xaliyo dhibaatadan waa inaad kaliya hagaajisaa jadwalka. Xaqiiqdii way ka shaqeynayaan, runtiina si weyn ayaa loo hagaajiyay.
Dhibaatada kale ee ay leedahay Android ayaa ah in geeddi-socod kastaa uu yahay mashiin Java-ga u gaar ah oo ay ku fiicnaadeen iyaga oo wadaagaya xusuusta maktabadaha guud (sida Linux / UNIX si dabiici ah u sameeyo) iyo koodh aad loo habeeyay.
Barnaamijyada ku jira Android waxay ku jiraan koodhkaas dhexdhexaadka ah ee lagu turjumay mashiinka farsamada, halka macruufka uu ku dhashay processor-ka (kaas oo siinaya faa iidooyinka xawaaraha, laakiin faa'iido darrooyinka la qaadan karo iyo kala duwanaanta, kuwaas oo lagu xallinayo hal nooc oo qalab ah) . Xaqiiqdii waxaa jira waxyaabo la horumarin karo, laakiin cillad darradaani way ka sii yaraaneysaa oo ka sii ballaarineysaa ballaarinta xawaaraha processor-ka, iyo gaar ahaan kaydka.
Jadwallayaashu maahan saynis sax ah, waa wax aad u buuq badan, oo leh "kiisas aad u daran" (kiisaska geeska) oo aan ku ogaan karno kuna dari karno heuristics oo lagu barto khibrad.
Waxay u badan tahay in dhibaatadu ay baabi'i doonto (sedex sababood oo aasaasi ah, hagaajinta jadwalka, maareynta mashiinka kumbuyuutarka ee Java iyo hagaajinta qalabka), waxa aan la dhihi karin, waqtigan, waa inay markasta fiicnaaw, taasina waa dhibaato naqshad asal ah
Laakiin halkan waa waxa ugu fiican ee ku saabsan Android, waana in injineerada laftoodu qirayaan tan oo ay si adag uga shaqeeyaan hagaajinta. Aad ayey u badan tahay oo ay diiradda u saartay qaybteeda cusub ee ICS waana hubaal inay la qabsan doonto (haddii aysan ka dhaafin) heerka faseexnimada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Miyuu IOS ka dheecaan badan yahay Android?
Waxaan hayaa isku xirnaanta galaxy iyo dareeraha durba waa la barbardhigi karaa dhinacyo badan. ICS waa horumar laga gaadhay dhinacaas.
Anigu waxaan ku jiraa s2, xitaa markay ka soo baxdo sanduuqa, oo ay la socdaan in ka badan 120 barnaamij oo la rakibay, widget ah, iyo wax walba ah, oo dareeraha si fudud u qumman
Jawaab ku bixi Safarka
xiisaha leh .. cusbooneysiinta mustaqbalka ics waxay wax badan ka hagaajineysaa mustaqbalka afar geesoodka isla markaana galaxy nexus wuxuu ku duulaa fiidiyowyada la arkay ...
Kiniiniga Android dijo
Ku jawaab Android Tablet
Adigu waxaad u wajahaysay arrintani si macquul ah oo cad. Anigu waxaan ahaa qof istcimaala muddo dheer iyo aalado kala duwan, waana run in gaalxy s2 uu yahay taleefankii ugu horeeyey ee aanan ku kala duwanaansho macruufka ah ee macruufka, laga yaabee inay sabab u tahay laba-geesoodka, in kasta oo jilicsanaanta jilicsan ee aan filayo sidoo kale saameyn. +1
Qoraalkani wuxuu ku kasbaday * wax badan * adoo ku xiraya boostada asalka ah, halkaasoo Andrew Munn uu tifaftiray si uu farta ugu fiiqo qoraal kale oo ay soo saartay Dianne Hackborn oo uu faallo ka bixiyo inay iyadu sax tahay (isagu = intern, iyadu = injineerka mas'uulka ka ah mowduuca laga hadlayo) ).
Halkan wax ka beddelkiisa:
Tifatir: + Dianne Hackborn ayaa jawaab uqortay qoraalkan. Waxay caddeysaa waxyaabaha ku saabsan Android ee aan khalday, waxayna si aasaasi ah u diidaysaa aragtida qoraalkan iyada oo soo jeedineysa in amniga sii kordhaya iyo dabacsanaanta barnaamijka Android ee ka sarreeya iOS ay sabab u tahay waxqabadka kor ku xusan iyo in qalabka sii kordhaya ee degdegga ahi uu gacan ka geysan doono xallinta arrinta:
Way fiicnaan laheyd inaad ku kalsoonaato ereygeeda tan, maxaa yeelay iyadu waa ereygii ugu dambeeyay ee arrimaha qaab dhismeedka Android.
Jawaab Rubén González
Waxaan leeyahay SGS2 waxaanan ka imid SGS waana run oo waxay muujineysaa dheecaan badan iyo jawaab celin taabasho leh. Laakiin wali waxay leedahay daahitaan yar oo aan ios lahayn. Hal dariiqo oo si fudud lagu ogaan karo waa codsi biyaano ah. Taabashada shaashadda si loo maqlo garaaca oo isla markaa ka dib ayaa la maqli doonaa qoraalka biyaanada. Daahitaankaas yar ayaa ah waxa ugu yar ee aan dhibaatada ku rido Android-ka iyo macruufka aanu lahayn Waxaan rajeynayaa inay saxdo maxaa yeelay waan jeclahay barnaamijyada muusigga, hehe.
Waxaa jira farqi aad uxun oo udhaxeeya GingerBread iyo Ice cream Sandwich kaas oo soo jiitay, dareeraha, iskudarsanaanta badan, saameynta muuqaalku waxay kuqalantay baaxad weyn oo aan kala kulmay Galaxy S oo ah halbeegga iyo ROM karsan oo laga soosaaray Koodhka kaliya ee ICS 4.0.1. XNUMX adigoon si buuxda u dhegeysan halkan waad arki kartaa http://www.youtube.com/watch?v=B9e4iwoZ5xo Shaki la'aan, Jelly Bean Android wuxuu gaari doonaa heerkiisa ugu sarreeya ee nidaamka hawlgalka moobiilka.
Wax fiican waxaan go aansaday inaan iibsado SAMSUNG GALAXY S 2
in ilaa maanta wax dhibaato ahi i siinayn, waan ku qanacsanahay
xawaareheeda waa wax lala yaabo, shaashadeeda SUPER AMOLED PLUS
waa midda labaad midna.
Sikastaba waligood ma gaari doonaan macruufka haddii aan u oggolaado oo waxaan ku haystay gacmahayga gacmo aad bay u fiican yihiin laakiin iyagu uma shaqeeyaan iphone iyo wax ka badan haddii ay leedahay JAILBREAK, ka raadi macluumaad yar cydia iyo wax kasta oo ku jira adigana arki doonaa farqiga weyn
Midig, waxaan haystaa iPhone 4 shaqsi ah iyo Samsung Galaxy II oo shaqo ah. Kaliya maahan dareeraha, isdhexgalka iyo dareenka iPhone-ka ayaa ka sareeya, laga yaabee inay isla sababtii tahay, barnaamij software / OS loogu talagalay qalab ayaa la sameeyay. Liis walba waxa aad rabto ka mid ah. Ma jiraan wax badan oo hoos u dhac ah oo lagu sameeyo howlaha, waa sida haddii ay garanayaan waxaad dooneyso inaad raadiso waqti kasta (haddii aad rabto inaad tirtirto wax waxay ku sawireen warqad yar koonaha, iyagoo ku baaraya WEB-ka iPhone safari Weli waan jeclahay wax badan, Xaqiiqdii, wali ma garanayo halka badhanka badhanka biraawsarku yaalo, kii ka dambeeyay way igu adkaatay inaan fahmo inuu guud ahaa inaan dib u laabto ...)
Waxay siinaysaa dareenka ah in wax walba si fiican looga fikiray, maaha sida ugu badan ee ku jirta Android taas oo, in kasta oo ay bixiso fursado badan, ay ka yar tahay garashada iyo garaafka. Xaqiiqdii, badhanka kaliya ee iPhones leeyihiin si sax ah ayaad u dooneysaa codsi kasta, uma baahna wax intaa ka badan (taabasho iyo muuqaal ahaanba)
Daahitaankii yaraa ee aanu macruufku lahayn ayaa sidoo kale wali la ogaaday
Waxaan hayaa dareen dareen ah waxaanan dhex maray mytouch 4g, mytouch 4g slide, sidekick 4g iyo qalbiga Android waa nidaam fiican laakiin hada lama barbar dhigi karo macruufka maaddaama ay leedahay waxyaabo badan oo sawiro ah, ciyaaro badan iyo barnaamij iyo qaab fiican si aad u isticmaasho. Waxa kaliya ee aanan ka helin iPhone-ka ayaa ah in shaashadda ay yar tahay haddii ay abuuri lahaayeen iPhone leh shaashad 4.3 ”aad ayey uga sii fiicnaan laheyd. Laakiin iPhone-ku waa mid gaar ah, waan haystay ilaa bilo ka hor runtiina waxaan ka jeclahay iPhone-ka taleefan kasta oo Android ah, si kasta oo ay u cusub yihiin iyo wax walba, dabcan Android-na way iibisaa wax badan maxaa yeelay taleefannadu way ka jaban yihiin waxayna leeyihiin dhammaan noocyada laakiin weli dagaalka waa mid aad u xitaa maadaama iphone ay tahay hal sumad ... Salaan dhamaantiin ..
Sidaad adigu leedahay, Farandulero93, waxaan ku bilaabay iphone (xittaa 3G), waxaan aaday HTC Magic oo waxaan isku dayay inaan jacayl la galo Android, maxaa yeelay waan ka helay fikradda ... laakiin waqti kadib waxaan xaqiiqsaday inaysan daboolin iPhone. Hadda waxaan haystaa iPhone 4 (xitaa xitaa 4s) iyo Samsung Galaxy S II iyo farqiga dareeraha ayaa ah mid naxariis darro ah. IPhone-ka aad buu uga sarreeyaa.
Waxyaabaha intiisa kale waa isku mid, wax u fudud sida dhigista liiska sare (android) ama qeybta hoose ee (iPhone) shaashadda ayaa suurta gelineysa in qeybta dambe lagu shaqeeyo hal gacan oo lagu xusho suulka. Taas oo markii hore shaashadda iPhone-ka ay caddaan tahay xarfaha madow marka la barbar dhigo ka soo horjeedka Galaxy-ga waxay ka dhigeysaa mid wanaagsan ...
Sida aan had iyo jeer idhaahdo, iPhone aad ayuu u bislaaday runtiina wax dhib ah kama jiraan iPhone-kii ugu horreeyay ee aan haysto. Waxay u muuqataa in liis kasta ay ka fikireen waxaad rabto oo ay ku siineyso suurtagalnimada, Android waa inaan ku dhex wareegayaa menusyada weligood hoos u dhacaya
Weli waxaan garwaaqsanahay in Samsung Galaxy S II uu yahay qayb ka mid ah taleefannada casriga ah
Marka waxaad arki kartaa in mid waliba la qabsado waxa uu ugu jecel yahay. Dhinaceyga, waxay igu dhacdaa markii aan qaato Iphone-ka waxay ii keentaa madax xanuun xaqiiqda ah inaysan lahayn badhanka taabashada (ama muuqaal ahaan) inay dib ugu laabato. Kaliya guriga, haddii aad rabto inaad dib u laabato waa inaad taabataa shaashadda badhanka dambe ee caadi ahaan xagga sare ah.
Waxyaabo kale ayaa ah, tusaale ahaan, haddii aad ku dhex jirtid biraawsarka oo aad rabto inaad beddesho goobaha qaarkood, waa inaad ka baxdaa arjiga oo aad aadaa goobaha taleefanka iyo qaybta biraawsarka. In Android codsi kasta wuxuu leeyahay qaabkiisa, uma baahnid inaad tagto goobaha guud si aad u hesho.
Laakiin waxaan idhi, waa waxyaabo yaryar oo mid walbaa dhibaato arki doono kuwa kalena arki maayaan.
In kastoo farsamo ahaan macruufka iOS laga yaabo inuu ka fiicnaado dhinacyada qaarkood, haddana farqiga ayaa ugu yar. Mana aha arrin aad muhiim u ah, inteena badani waxaynu door bidnaa midnimo iyo waxyaabo kale. Taasi waa sida Windows u guuleystey.
Apple waxtar ayey ku leedahay arintaan maadama ay kaliya gacanta ku heyso 1 aalad mobiil ah, taa bedelkeedna android wey ku adagtahay tan iyo markii ay tahay inay la jaan qaado nidaamkeeda aalado badan marka lagu daro u ogolaashada waxbadan oo faragalinta barnaamijyada aakhirka ka dhigaya mid gaabis ah , inaad yeelato wax walba. Apple waxay leedahay buulkeedii codsiyada ee aan dhibaato u keenin nidaamkaaga maadaama ay horey u soo mareen kantaroolida shuruudaha. waxay la mid tahay sidii aad si xushmad leh u ururineysid miraha si aanad u qaadan mid qudhun ah oo suntaada dambiiliya.